Gulnara Yunusova: Ny roa taonako tato amin'ny GV
Raha fehezina, dia azo lazaina tsara fa nihoatra noho ny nantenaina ny traikefako tamin'ny GV. Rehefa nidiitra ho mpikambana aho, dia nihevitra fa resaka lahatsoratra izany - kanefa toa hita fa fifaneraserana amin'ny olona marobe ihany koa izany.
Nianatra zavatra betsaka avy amin'ny tsirairay teto aho! Tsy ho ampy ny fisaorako ny rehetra! Tena manana lanja be amiko ny GV satria ny GV koa no nahafantarako ny tenako ! Tiako daholo ianareo !! Indrindra fa ny TARIKA GV PAKISTANA misy ahy!!
Gaga aho raha nieritreritra fa tsy hahaliana ireo firenena hafa niharan'ny horohoron-tany, ny tsunamis izay namono olona an'arivony na an'aliny ny loza mitranga ao aminay. Vao maika gaga be raha nahita fa iray amin'ireo lahatsoratra malaza indrindra tamin'ny taona ny ‘Aostralia: Doro-tanety nandrava an'i Victoria’ .
Tahaka ny maro amin'ireo mpikambana hafa ato amin'ny GV, hitako tamin'ny Google ny Global Voices, ary tiako ny Google noho izany. Te hanatsara ny fahaizako Anglisy sy ny fandikan-teny aho, satria tsy manana traikefa manan-danja, ny hany fomba natao ny milatsaka an-tsitrapo.